EURO 2016: Switzerland iyo Romania oo is mari waayay…(Admir Mehmedi oo rikoodh cusub u dhigay xulkiisa)+SAWIRRO – Gool FM
EURO 2016: Switzerland iyo Romania oo is mari waayay…(Admir Mehmedi oo rikoodh cusub u dhigay xulkiisa)+SAWIRRO
Byare June 15, 2016
(France) 15 Juunyo 2016. Romania iyo Switzerland oo isku garab dhacay kaddib markii ay isku dhaafi waayeen 1-1 kulankoodii labaad ee wareega Group A ee Euro 2016.
Qeybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala maray 1-0 oo uu ku hogaaminayo xulka Romania.
Daqiiqadii 18-aad ee ciyaarta ayaa waxaa rigoore xulkiisa Switzerland ku keenay daafaca Juventus Stephan Lichsteiner kaddib markii uu funaanada ka jiiday Alexandru Chipciu oo ku jira diilinta ganaaxa.
Bogdan Stancu ayaa tuuray rigoorada oo 12-yard goosha u jirta isla markaana dhaliyay waana rigooradii labaad uu dhaliyo tartanka kaddib tii uu ka dhaliyay xulka Faransiiska.
Wuxuu noqday Bogdan Stancu laacibkii ugu horreeyay ee labo rigoore ka dhaliya Euro tan iyo Mendieta sanadii 2000.
Inkastuu xulka Switzerland ku gacan sareeyay qeybtii hore dhanka heysashada kubbada misane marka la eego fursadaha la isku sigay waa la iska daba dhawaa.
Markii la isku soo laabtay qeybtii labad ee ciyaarta daqiiqadii 57-aad Admir Mehmedi ayaa goolka bar-baraha u dhaliyay xulkiisa Switzerland kaddib markii uu xulka Romania ku guul darreystay inay iska bixiyaan karoos la soo dhex dhigay wareegooda, waxaana uga shubay Mehmedi.
Admir Mehmedi ayaa noqday laacibkii ugu horreeyay ee xulka Switzerland kaa oo gool ka dhaliya tartanka Euro iyo koobka adduunka (2014 wuxuu ka dhaliyay Ecuador).
Wax fursado kale oo halis ah la iskuma helin oo waxay ciyaartu ku soo idlaatay bar-baro, xulka Switzerland ayaa hogaaminaya group-ka A 4-dhibcood, laakiin Faransiiska ayaa kala wareegi doona haddii uu caawa ka soo adkaado Albania.
DAAWO: Lionel Messi oo ku fal-falaadaya goolhayaha xulka Bolivia
GOOGOOSKA: France vs Albania 2-0 (Faransiiska oo goolal soo daahay ku diley Albania)